Fihetseham-pandehan'ny sehatra 5 Content na fampivoarana data
. Ny tanjon'ity teknika ity dia ny fahazoana fampahalalana mahasoa avy amin'ny tranonkala isan-karazany ary ny manova azy ao amin'ny endrika azo tsapain-tanana toy ny spreadsheets, ny CSV sy ny antontanisa. Azo antoka ny filazana fa maro ireo sehatra mety hitrangan'ny data, ary ny fikambanana, ny orinasa, ny matihanina, ny mpikaroka sy ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra dia manakona tarehintsoratra isan'andro. Ny fitrandrahana ireo angona voatahiry avy amin'ny blaogy sy tranokala dia manampy antsika handray fanapahan-kevitra mahomby amin'ny orinasanay. Ireo singa dimy manaraka na ny teknikam-pamokarana votoaty dia miely amin'izao fotoana izao.
Ny tranonkala rehetra dia entin'ny HTML, izay heverina ho fiteny fototra ho an'ny tranonkala fampandrosoana. Ao anatin'ity rakitra ity na rakitra faka amin'ny endri-tsoratra, ny votoatina izay voafaritra amin'ny endrika HTML dia miseho ao anaty fonosana ary voahodina amin'ny format malalaka. Ny tanjon'ity teknika ity dia ny famakiana ireo antontan-taratasy HTML ary manova azy ireo ao amin'ny tranonkala hita maso. Ny Content Grabber dia toy ny fitaovana famafazana angona izay manampy mora amin'ny angona HTML amin'ny rakitra.
XPath teknika dia lafiny manan-danja amin'ny tranonkalan'ny web . Io no singa miavaka amin'ny fisafidianana ireo singa ao amin'ny format XML sy HTML. Isaky ny manasongadina ireo angona tadiavinao ianao dia hanova azy ho lasa mora vakina sy azo havaozina ny sainao. Ny ankabeazan'ny fitaovana fanasivanana ao amin'ny tranonkala dia manaisotra ny fampahalalana avy amin'ny tranonkala raha toa ka asongadinao ny angon-drakitra, fa ny fitaovana ampiasaina amin'ny XPath dia mitantana ny safidy data sy ny fitrandrahana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny asanao.
4. Fomba fiteny matetika
Amin'ny fomba fiteny tsotra dia mora amintsika ny manoratra ny faniriana faniriana ao anatin 'ny tady ary mamoaka lahatsoratra ilaina avy amin' ireo tranonkala goavam-be. Amin'ny fampiasana Kimono, afaka manao asa maro samihafa ao amin'ny Internet ianao ary afaka mitantana ny fomba fiteny amin'ny fomba tsara kokoa. Ohatra, raha misy tranonkala tokana ahitana ny adiresy manontolo sy ny antsipirihan'ny orinasa iray, dia azonao atao ny mividy sy mamonjy io angon-drakitra io amin'ny fampiasana Kimono toy ny fandaharana fandinganana tranonkala. Azonao atao ihany koa ny manandrana ny fanontana ara-dalàna mba hizaràna ireo andinin-tsoratra adiresy ho an'ny tsindrin-tsakafo ho anao.
5. Famaritana ny semantic annotation
Ny pejy voasoritsorin'ny pejy dia mety hanaraka ny sary, ny fanamarihana na ny metadata, ary io fampahalalana io dia ampiasaina mba hahitana ny angona angona manokana. Raha ampidirina ao anaty pejin'ny tranonkala ny fanamarihana, ny fankatoavana ny fanamarihana semantika dia ny hany fomba hanehoana ny vokatra tadiavina ary ny fitehirizana ny angon-drakitrao raha tsy misy manohintohina ny kalitao. Noho izany, azonao atao ny manamboatra tranokala izay afaka mamerina ny toro-làlana sy ny torolàlana mahasoa avy amin'ny tranonkala samihafa Source .